Imisebenzi - Yuxin Wright Industrial Prototype Co., Ltd.
Ukuvikela nokwenza izinto nge-In-House Management Management
U-Yu Xin Wright uhlinzeka lonke uhla lwezinsizakalo zokukhiqiza nokwenza izinto. Isigaba ngasinye senqubo siqedwa ngaphansi kophahla olufanayo. Onjiniyela bethu bakulungele ukusiza ngemiklamo, ukukhetha izinto ezibonakalayo, nemidwebo yakho ye-CAD. Yonke iminyango yethu yokukhiqiza ixhumene nokuxhumana okungcono, ukuphepha nokusebenza kahle. Akunandaba nosayizi wephrojekthi, wonke amakhasimende anesisindo esigcwele sezinsizakalo zethu ngemuva kwawo.
Ukuhlala ekhanda lamakhono okukhiqiza e-CNC, sisebenzisa imishini esezingeni eliphakeme kakhulu efakwe okwakamuva ekusekeleni isoftware. Onjiniyela bethu bahlala behamba phambili ekuthambekeni komkhakha nentuthuko, okuholela ekutheni kube namandla angenakulinganiswa okukhiqiza. Ngokusebenzisa iqoqo lethu le-3-, 4-, ne-5-axis CNC imishini singakhonza inqwaba yezicelo sisebenzisa inqwaba yezinsimbi, ama-alloys, nama-plastiki. Iba nezingxenye zensimbi ezinembile, eziphelile ezinsukwini ezi-2-5 nje.
Ukuphrinta kwe-3D kungukuthuthuka kwakamuva ekwakhiweni kwesibonelo. Usebenzisa ukuphrinta kwe-SLA ne-SLS, i-Yu Xin Wright Tech ingaveza izethulo ezinembile, ezincane, ezisebenzayo zomklamo wakho ngamahora angama-24-48 kuphela! Ama-porotypes e-3D alungele ukucacisa umsebenzi womkhiqizo, achaze umqondo, noma agcizelele umtshalizimali.
Ishidi lensimbi liqinile, lithambile futhi lithandwa kakhulu. Ishidi lensimbi liyamelana nokubola nokushisa. Izinsimbi eziningi ezifaka ithini, insimbi engagqwali, i-nickel, ithusi ne-aluminium zingasetshenziswa ekwakhiweni kwensimbi. Ishidi lensimbi livumela ukwakhiwa nokukhiqizwa kobujamo obuyinkimbinkimbi nemiklamo, kufaka izingxenye ezenziwe ngensimbi yensimbi ezimbonini eziphambili emhlabeni jikelele.
Khiqiza izinkulungwane zezingxenye zepulasitiki ezifanayo futhi eziyinkimbinkimbi ngokushesha ngezinsizakalo zepulasitiki zokujova ngomjovo ngo-Yu Xin Wright. Izingxenye ezenziwe ngepulasitiki zinokumelana namakhemikhali, izinto eziphilayo kanye nemvelo okwenza kube wusizo esikhaleni esikhulu sezimboni. Ipulasitiki yomjovo wokubumba isebenza ngamapulasitiki amaningi ahlukene, ngalinye lalo elingaqedelwa ngemiphumela ehlukene ngaphakathi endlini. Singadala amathuluzi ayinkimbinkimbi we-aluminium prototype ngezinsuku ezingaphansi kwezingu-5-7. Amathuluzi wokukhiqiza angakhiqizwa emasontweni ama-2-4 kusetshenziswa i-P20 steel.
Ama-die casting enza izinto zensimbi zibe ubujamo obenzelwe ukucaciswa kwakho. Kufa okwenziwe esikhungweni sethu se-CNC, bese kusetshenziselwa ukwakha izinsimbi ezifanayo zensimbi. Ama-casts apholisiwe futhi ahlolwe, futhi izinsizakalo eziningi zokuqedela zingasetshenziswa ngenhloso yokusetshenziswa nezimonyo. Singakhiqiza amathuluzi we-Die Casted emasontweni angama-2-4 kuphela sisebenzisa insimbi ye-H13. Siphinde sinikele: Ukuhlolwa kokuvuza, ukumitha, i-Anodizing, i-Powder Coating, ukufaka, ukwenza imishini yesibili nokuhlanza.
Izinto ezenziwe kusetshenziswa irabha le-silicone ziyamelana nokugqwala, amakhemikhali, azithinteki ugesi, futhi zihlala isikhathi eside ngaphansi kwezimo ezimbi kakhulu. Eqinisweni, i-Liquid Silicone Rubber (i-LSR) isesidingo esikhulu kangako ngoba isebenzise cishe kuyo yonke imboni emhlabeni jikelele. I-LSR itholakala ngemibala eminingi, ingasetshenziswa ekuphrinteni kwe-3D, futhi ingasetshenziswa ekubunjweni komjovo ukudala izinkulungwane zamayunithi.
Sinomnyango wokuqedela ngaphakathi endlini okwazi ukusebenzisa inani elimangalisayo lokumboza futhi uqede kumaphrojekthi akho aqediwe. Izinsizakalo zokuqedela zinikela ngokubonakala okuthuthukile nokuqina kwama-prototypes, ukukhiqizwa kwe-batch encane, nokukhiqizwa kwevolumu ephansi. Ngokufanisa umbala othize, sisebenzisa uhlelo lokufanisa umbala lwePantone ngokunemba ngokweqile nokuxhuma okungenamthungo.